इलेक्ट्रिक बाइक या स्कुटर किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् | Automotive News Nepal
इलेक्ट्रिक बाइक या स्कुटर किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् ५ कार्तिक, २०७६
पछिल्लो समयमा इलेक्ट्रिक बाइक र स्कुटरको प्रयोग बढ्दै छ । हालै बजाजले पुरानो ब्रान्ड चेतकलाई इलेक्ट्रिक भर्सनमा लन्च गरेको छ । नेपाली बजारमा समेत विभिन्न ब्रान्डका इलेक्ट्रिक टु ह्विलर रहेका छन् ।
इलेक्ट्रिक बाइक वा स्कुटर किन्दा केही कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
फुल चार्जमा कति दुरी ?
नयाँ इलेक्ट्रिक बाइक या स्कुटर खरिद गर्दा यसले फुल चार्जमा कति दुरी तय गर्छ भन्ने जानकारी लिनु पर्छ । फरक फरक मोडलको ड्राइभिङ रेन्ज फरक हुन्छ । जस्तै ६० देखि १५० किलोमिटरसम्म हुन सक्छ । यी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कुटरमा स्पोर्ट मोड, इको मोडको परफर्मेन्स पनि फरक हुन सक्छ ।
इलेक्ट्रिक बाइक या स्कुटरको पिकअप कति छ सो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्छ । इलेक्ट्रिक बाइकमा हुने मोटरले चाँडै टर्क लिन्छ जसले चाँडै पिकअप लिन्छ ।
हरके इलेक्ट्रिक बाइक या स्कुटरमा रिजेनरेटिभ ब्रेकिङ उपलब्ध रहेको छ वा छैन सो कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । यसले टु ह्विलरमा जडान गरिएको व्याट्री चार्ज र डिस्चार्जलाई कन्ट्रोल गर्न मदत गरेको हुन्छ ।
सबै प्रकारको आधुनिक टु ह्विलरमा लिथियम आयोन व्याट्री जडान गरिएको हुन्छ भने पुरानो मोडलमा लेड एसिडको प्रयोग गरिएको हुन्छ । लेड एसिडको आयु २ वर्षको हुन्छ भने लिथियम आयोन व्याट्रीको आयु ५ वर्ष रहेको हुन्छ ।
इलेक्ट्रिक टु ह्विलर खरिद गर्दा ब्याट्रीको क्षमतामा पनि ध्यान दिनु पर्छ । केही कम्पनीले ब्याट्री एम्पियर आवरमा मापन गर्छ भने केही कम्पनीले किलोवाट आवरमा मापन गरेको हुन्छ । ब्याट्रीको क्षमता जति बढी हुन्छ ड्राइभिङ रेन्ज पनि त्यति नै बढी हुन्छ । लिथियम आयोन व्याट्रीमा १०० प्रतिशत हेफ्थ अफ डिस्चार्ज हुने अनुमान गरिएको छ जसको अर्थ हो सो व्याट्री १०० प्रतिशतसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कुनै पनि इलेक्ट्रिक साधनमा व्याट्री सबैभन्दा महत्वपुर्ण पार्ट हुन्छ । केही कम्पनीले व्याट्रीमा अतिरिक्त वारेण्टी पनि दिएको हुन्छ । व्याट्रीमा वारेण्ट समय र दुरीको आधारमा दिएको हुन्छ । जस्तै कम्पनीले ५ वर्ष वा एक लाख किलोमिटरसम्मको वारेण्टी दिएको हुन्छ । यदि बाइक या स्कुटरको रेन्ज १०० किलोमिटर छ भने व्याट्रीले ८० किलोमिटरसम्मको दुरी तय गरेको हुन्छ ।
इलेक्ट्रिक बाइक वा स्कुटर खरिद गर्दा चार्जरको रेटिङ जाँच गर्नु पर्छ । त्यसमा कति भोल्टेज वा एम्पियर आवश्यक छ त्यो जाँच गर्नु पर्छ । डिस्चार्ज व्याट्री चार्ज गर्नको लागि कति समय लाग्छ सोको पनि जानकारी हुनु पर्छ । यसमा फास्ट चार्जिङको सुविधा छ वा छैन त्यो पनि जाँच गर्नुपर्छ । फास्ट चार्जिङमा ३० देखि ४० मिनेटमा ८० प्रतिशतसम्म चार्ज हुने गरेको छ । फास्ट चार्जिङको लागि कम्पनीले इक्विपमेन्ट दिन्छ वा दिदैन सो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । केही कम्पनीले व्याट्री चार्जरमा पनि वारेण्टी दिएको हुन्छ ।
साधारणतया कम्पनीले ब्रशलेस डिसी र तीन फेज भएको एसी इन्डक्शन मोटर दिएको हुन्छ । ब्रशलेस डिसीले मेन्टिनेन्स फ्रि र बढी टर्क जेनेरेट गर्ने हुन्छ भने यसको क्षमता ९५ देखि ९८ प्रतिशत सम्म रहेको हुन्छ । इन्डक्शन मोटर ९२ देखि ९५ प्रतिशतसम्म क्षमता रहेको हुन्छ भने यो सस्तो पनि हुन्छ ।
टु ह्वीलर इलेक्ट्रिक मोटरको आउटपुट एनर्जी यसलाई चलाउनेमा निर्भर रहेको हुन्छ र यो किलोवाटमा मापन गरेको हुन्छ । साधनको टप स्पिड पनि यसमै निर्भर रहेको हुन्छ । कुनै पनि साधनको टर्क जति बढी हुन्छ त्यति नै यसको पिकअप उत्कृष्ट रहेको हुन्छ । यसलाई न्युटन मिटर आरपीएममा मापन गरिन्छ । बढी टर्क र कम आरपीएमको अर्थ उत्कृष्ट पिकअप हो ।
जति धेरै आईपी रेटिङ हुन्छ त्यति नै गाडी धुलोदेखि सुरक्षित हुनछ । जस्तै आईपी ६५ को अर्थ धुलो र पानीदेखि सुरक्षित हो । आईपी ६७ को अर्थ धुलोको साथै १५० एमएम देखि १००० एमएम वर्षामा ३० मिनेटसम्म सुरक्षित हुन्छ । आईपी ६८ को अर्थ धुलोको साथै पुरै पानीमा डुब्दा पनि केही असर गर्दैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।
लेटेस्ट मोडलमा मोबाइल एप सपोर्टको साथमा राइडिङ प्याटर्न, ट्रिप इन्फोरमेशन चार्जिङ प्रतिशत, जियो फेसिङ र जीपीएस जस्ता फिचर पनि रहेको हुन्छ ।
कम क्षमता भएको इलेक्ट्रिक साधनको लागि लाइसेन्स लिनु आवश्यक हुँदैन । कुनै पनि इलेक्ट्रिक बाइकमा २५ किलोमिटर प्रतिघन्टा र मोटर आउटपुट २५० वाट छ भने सामान्यत लाइसेन्स लिनु वा रजिस्ट्रेशनको आवश्यकता पर्दैन ।
भारतमा लन्च भयो नयाँ बजाज डोमिनार ४००, यस्तो छ मूल्य र विशेषता
बजाजले डोमिनार ४०० बाइकको नयाँ भर्सन भारतमा लन्च गरेको छ । नयाँ डोमिनारको मूल्य...
पुस २२, काठमाडौं – बेलायती प्रकाशक कम्पनी रफ गाइड्सले विश्वका भ्रमण योग्य मुलुकक...
फोर्डले ल्याउँदै छ एलेक्सा फिचर, बोलेरै कार स्टार्ट गर्न सकिने
फोर्डले आफ्नो नयाँ कारमा एलेक्सा फिचर जोड्ने तयारीमा गरेको छ । यसले ड्राइभरको आव...